Mividiana scanner 3D: ny fomba hisafidianana ny tsara indrindra | fitaovana maimaim-poana
Ho fanampin'ny fahafahanao mamolavola ho anao ny géométrie an'ilay sombin-javatra tianao hatonta amin'ny anao 3D mpanonta amin'ny fampiasana rindrambaiko, misy ihany koa ny fahafahana tsotra kokoa izay afaka mandika ny zavatra efa misy amin'ny fomba marina. Ny momba azy Scanner 3d, izay hikarakara ny fitarafana ny endrik'ilay zavatra tianao sy hamadika azy ho endrika nomerika mba hahafahanao mamerina azy na manonta azy ho toy ny fanaovana kopia.
Ao amin'ity torolàlana ity dia ho hitanao hoe inona izy ireo. ny scanner 3D tsara indrindra sy ny fomba ahafahanao misafidy izay mety indrindra arak'izay ilainao.
3D scanner... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Inncen Pop 3D Scanner,... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
EINSCAN-SP 3D mamirapiratra -... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Kit Scanner HE3D... Jereo ny fiasa Jereo tolotra
Ny tsara indrindra	3D scanner...
Kalitaon'ny vidiny	Inncen Pop 3D Scanner,...
Ny ankafizinay	EINSCAN-SP 3D mamirapiratra -...
1 Scanner 3D tsara indrindra
1.1 Mamirapiratra 3D EINSCAN-SP
1.2 Mamirapiratra 3D Uno Can
2 Inona no atao hoe scanner 3D
2.1 3D scanner ny fomba fiasa
2.2.1 Scanner 3D finday
2.3 Fampiharana scanner 3D
2.4 Ahoana ny fisafidianana scanner 3D
Scanner 3D tsara indrindra
Betsaka ny marika malaza, toy ny Zeiss alemana malaza, Shining 3D, Artec, Polyga, Peel 3D, Phiz 3D Scanner, sns., ka vao mainka sarotra ny misafidy. Raha manana fisalasalana momba ny scanner 3D hovidiana ianao dia ireto ny sasany amin'izy ireo. modely tsara indrindra Ny soso-kevitray hanaovana ny fividianana tsara:
Mamirapiratra 3D EINSCAN-SP
EINSCAN-SP 3D mamirapiratra -...
Este Ny scanner 3D miaraka amin'ny teknolojia maivana fotsy dia anisan'ny tsara indrindra raha mitady zavatra matihanina ianao. Ny famahana azy dia hatramin'ny 0.05 mm, maka na dia ny antsipiriany kely indrindra aza. Izy io dia afaka mijery tarehimarika avy amin'ny 30x30x30 mm ka hatramin'ny 200x200x200 mm (miaraka amin'ny turntable) ary koa ny sasany lehibe kokoa amin'ny 1200x1200x1200 mm (raha ampiasaina amin'ny tanana na amin'ny tripod). Ankoatra izany, dia manana hafainganam-pandeha tsara scanning, fahafahana manondrana any OBJ, STL, ASC ary PLY, rafitra calibration mandeha ho azy, ary connecteur USB. Mifanaraka amin'ny Windows.
Mamirapiratra 3D Uno Can
Ity modely hafa amin'ity marika malaza ity dia somary mora kokoa noho ny teo aloha, saingy mety ho safidy tsara ihany koa raha mitady zavatra ho an'ny fampiasana matihanina ianao. mampiasa koa teknolojia loko fotsy, miaraka amin'ny fanapahan-kevitra 0.1 mm ary ny fahafahana mijery tarehimarika avy amin'ny 30x30x30 mm ka hatramin'ny 200x200x200 mm (eo amin'ny turntable), na dia azonao ampiasaina ihany koa izany amin'ny tanana na amin'ny tripod ho an'ny tarehimarika 700x700x700 mm ambony indrindra. Manana hafainganam-pandeha tsara izy, mifandray amin'ny alàlan'ny USB, ary afaka miasa amin'ny endrika rakitra OBJ, STL, ASC ary PLY toy ny teo aloha. Mifanaraka amin'ny Windows.
Ity marika lehibe hafa ity dia namorona scanner ho an'ny modely 3D tena mora ampiasaina, miaraka amin'ny fanitsiana mandeha ho azy, tsy mila calibration na fampiasana marika. Mifandray amin'ny alalan'ny USB ary mifanaraka amin'ny Windows, Android ary macOS. Ankoatra izany, dia manana mari-pandrefesana avo hatramin'ny 0.1 mm sy ny famaha ny 0.5 mm, ary mety ho tonga lafatra ho an'ny fampiasana matihanina noho ny endri-javatra sy ny kalitao. Raha ny refin'ny scanning dia tena lehibe izy ireo, mba hijerena ampahany lehibe.
Ity scanner 3D avy amin'ny marika Espaniola BQ ity dia safidy tsara hafa raha tadiavinao zavatra takatry ny DIY. Scanner haingana 0.5mm miaraka amin'ny fakantsary Logitech C270 HD kalitao, laser linear Class 1 roa, connecteur USB, Nema stepper motors, mpamily ZUM, afaka manondrana any amin'ny G-Code sy PLY, ary mifanaraka amin'ny rafitra miasa Linux sy Windows.
Fomba hafa ho an'ny teo aloha. Scanner 3D misy a 0.3mm marina, Fanamafisana Infraroda roa (Azo antoka amin'ny maso), miaraka amin'ny fakan-tsary lalina, fakan-tsary haingana, fakan-tsary RGB ho an'ny fakan-tsary, OBJ, STL, ary PLY Fanohanana fanondranana, Wired na Wireless, fomba 5 samihafa, ary mifanaraka amin'ny Android, iOS, macOS ary ny rafitra fiasa Windows.
Inona no atao hoe scanner 3D
Un Ny scanner 3D dia fitaovana afaka mamakafaka zavatra na sehatra iray mba hahazoana angon-drakitra momba ny bika, ara-nofo, ary indraindray koa ny loko. Io fampahalalana io dia voahodina ary avadika ho modely nomerika telo dimensions izay azo ampiasaina hanovana azy ireo amin'ny rindrambaiko na hanonta azy amin'ny mpanonta 3D anao ary hanao dika mitovy amin'ny zavatra na sehatra.
Ny fomba fiasan'ireo scanner ireo matetika dia optika, miteraka rahona misy teboka fanondro manodidina ny velaran'ilay zavatra mba handinihana ny jeometrika marina. Noho izany, scanner 3D dia tsy mitovy amin'ny fakan-tsary mahazatraNa dia manana sehatra fijery miendrika cone aza izy ireo, ny fakan-tsary dia maka ny fampahafantarana miloko avy amin'ny habakabaka ao anatin'ny sehatry ny fahitana, raha ny scanner 3D kosa maka ny fampahafantarana ny toerana sy ny habaka telo.
Ny scanner sasany dia tsy manome modely feno miaraka amin'ny scan tokana, fa mila tifitra maromaro kosa mba hahazoana fizarana samihafa amin'ilay ampahany ary avy eo manjaitra azy amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Na eo aza izany dia mbola a mazava kokoa, mahazo aina sy haingana safidy mba hahazoana ny jeometria amin'ny ampahany iray ary afaka manomboka manonta azy.
3D scanner ny fomba fiasa
Ny scanner 3D amin'ny ankapobeny dia miasa amin'ny alàlan'ny taratra sasany avoaka ho a hazavana, IR, na taratra laser izay hanao kajy ny elanelana misy eo amin'ilay zavatra mamoaka sy ilay zavatra, manamarika teboka fanondro eo an-toerana sy teboka maromaro eo amin'ny faritry ny ampahany ho adika, miaraka amin'ny fandrindrana ho an'ny tsirairay. Amin'ny alàlan'ny rafitra fitaratra, dia hamafa ny eny ambonin'ny tany izy ary hahazo ireo koordinate na teboka samihafa mba hahatratrarana ny dika mitovy amin'ny lafiny telo.
Miankina amin'ny halaviran'ilay zavatra, ny fahamarinan'ny zavatra irina, ary ny habeny na ny fahasarotan'ilay zavatra, dia mety ilainao izany. maka iray na mihoatra ny iray.
Misy 2 karazana scanner 3D fototra, miankina amin'ny fomba scan:
Contact: Ireo karazana scanner 3D ireo dia mila manohana ampahany antsoina hoe tracer (matetika ny tendron'ny vy mafy na safira) eo ambonin'ilay zavatra. Amin'izany fomba izany, ny sensor anatiny sasany dia hamaritra ny toeran'ny spatial ny probe mba hamoronana indray ilay tarehimarika. Ampiasaina betsaka amin'ny indostria izy ireo amin'ny fanaraha-maso ny fizotran'ny famokarana ary amin'ny 0.01 mm mazava tsara. Na izany aza, tsy safidy tsara ho an'ny saro-pady, sarobidy (ohatra, sary sokitra ara-tantara), na zavatra malefaka, satria ny tendrony na ny stylus dia mety hanova na hanimba ny ety ivelany. Izany hoe, scan destructive ilay izy.
tsy misy fifandraisana: izy ireo no tena miparitaka sy mora hita. Antsoina izy ireo satria tsy mila fifandraisana ary noho izany dia tsy hanimba ny ampahany na hanova azy amin'ny fomba rehetra. Raha tokony ho famotopotorana izy ireo dia hampiasa ny famoahana famantarana na taratra sasany toy ny fitarafana, onja IR, hazavana, taratra X, sns. Izy ireo no miely indrindra sy mora hita. Ao anatin'ireo dia misy fianakaviana roa lehibe:
fananana: Ireo fitaovana ireo dia mamakafaka ny endrik'ilay zavatra ary, amin'ny tranga sasany, ny loko. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fandrefesana mivantana ny ambonin'ny, fandrefesana polar coordinates, zoro sy ny halavirana mba hanangonana telo-dimensional geometrika vaovao. Izany rehetra izany dia noho ny zava-misy fa miteraka rahona misy teboka tsy mifandray izay horefesiny amin'ny alàlan'ny famoahana karazana taratra elektromagnetika (ultrasound, X-ray, laser,...), ary havadika ho polygons ho fanarenana sy fanondranana any ivelany. modely 3D CAD. . Ao anatin'ireo dia hahita subtypes toy ny:
Fotoana sidina: karazana scanner 3D izay mampiasa laser ary ampiasaina betsaka amin'ny fijerena ireo faritra lehibe, toy ny fiforonan'ny jeografika, tranobe, sns. Mifototra amin'ny mangatsiatsiaka. Tsy dia marina loatra izy ireo ary mora kokoa.
triangulation: Mampiasa laser koa izy io amin'ny triangulation, miaraka amin'ny taratra mamely ilay zavatra ary miaraka amin'ny fakantsary izay mahita ny teboka laser sy ny halavirana. Ireo scanner ireo dia manana fahitsiana avo lenta.
fahasamihafan'ny dingana: fandrefesana ny fahasamihafan'ny dingana eo amin'ny hazavana mivoaka sy azo, mampiasa io fandrefesana io mba hanombanana ny halaviran'ilay zavatra. Ny fahitsiana amin'io heviny io dia manelanelana eo amin'ny roa teo aloha, ambony kely noho ny ToF ary ambany kely noho ny triangulation.
holographie conoscopic: dia teknika interferométrique izay iarahan'ny taratra hita taratra avy amin'ny velarana amin'ny krystaly birefringent, izany hoe krystaly izay misy indices refractive roa, ny iray mahazatra sy raikitra ary ny iray hafa miavaka, izay asan'ny zoro ny fihanaky ny taratra eo ambonin’ny vera. Vokatr'izany, taratra roa mifanitsy no azo izay natao hanelingelina amin'ny alalan'ny cylindrical family, io fitsabahana io dia voasambotry ny sensor ny fakan-tsary mahazatra mahazo lamina ny sisiny. Ny fatran'io fitsabahana io no mamaritra ny halaviran'ilay zavatra.
hazavana voarafitra: Manaova lamina maivana eo amin'ilay zavatra ary diniho ny fiovaovan'ny lamina vokatry ny jeometrika amin'ny sehatra.
hazavana modulated: Mamoaka hazavana izy ireo (matetika misy tsingerin'ny amplitude amin'ny endrika synodaly) miova tsy tapaka ao amin'ilay zavatra. Ny fakan-tsary dia haka izany mba hamaritana ny halavirana.
lafy ratsiny: Ity karazana scanner ity dia hanome vaovao lavitra amin'ny fampiasana taratra sasany hisambotra azy. Matetika izy ireo dia mampiasa fakan-tsary misaraka roa mitodika mankany amin'ny sehatra mba hahazoana vaovao miendrika telo amin'ny alalan'ny famakafakana ireo sary nalaina. Izany dia hamakafaka ny halaviran'ny teboka tsirairay ary hanome koordinate sasany hamoronana ny 3D. Amin'ity tranga ity, azo atao ny mahazo vokatra tsara kokoa rehefa zava-dehibe ny maka ny firafitry ny zavatra notarafina, ary koa ny mora kokoa. Ny maha samy hafa amin'ireo mavitrika dia tsy misy karazana taratra elektromagnetika mivoaka, fa mametra ny tenany fotsiny izy ireo amin'ny fakana ireo entona efa misy eo amin'ny tontolo iainana, toy ny hazavana hita taratra amin'ilay zavatra. Misy ihany koa ny variants sasany toy ny:
stereoscopic: Mitovy amin'ny fotogrammetria ampiasain'izy ireo, mamaritra ny halaviran'ny piksel tsirairay ao amin'ny sary. Mba hanaovana izany, amin'ny ankapobeny dia mampiasa fakan-tsary roa misaraka manondro ny sehatra iray izy. Ny famakafakana ny sary nalain'ny fakantsary tsirairay dia azo atao ny mamaritra ireo halavirana ireo.
Silhouette: Mampiasa sketsa noforonina avy amin'ny sary nifandimby manodidina ilay zavatra miendrika telo izy ireo mba hamakiana azy ireo mba hamoronana tombantombana hita maso ilay zavatra. Ity fomba ity dia manana olana amin'ny zavatra poakaty, satria tsy hisambotra ny atiny.
Modeling mifototra amin'ny sary: Misy fomba hafa ampiasain'ny mpampiasa mifototra amin'ny photogrammetry.
Scanner 3D finday
Matetika ny mpampiasa maro no manontany raha azonao atao mampiasa smartphone toy ny hoe scanner 3D. Ny marina dia ny finday vaovao dia afaka mampiasa ny fakan-tsarimihetsika fototra ahafahany maka sary 3D noho ny fampiharana sasany. Mazava ho azy fa tsy hanana valiny mitovy amin'ny valin'ny matihanina amin'ny scanner 3D voatokana izy ireo, saingy mety ilaina amin'ny DIY.
ny sasany tsara apps ho an'ny fitaovana finday iOS/iPadOS sy Android izay azonao alaina sy andrana dia:
Matetika koa izy ireo no manontany raha azonao atao manaova scanner 3d an-trano. Ary ny marina dia misy tetikasa ho an'ny mpanamboatra afaka manampy anao betsaka amin'io lafiny io, toy ny OpenScan. Hahita tetikasa mifototra amin'ny Arduino ihany koa ianao ary azo atao pirinty mba hanangonana azy ireo toa izao, ary afaka mahita mihitsy aza ianao Ahoana ny fomba hamadihana xbox kinect ho scanner 3d. Mazava ho azy fa tsara izy ireo toy ny tetikasa DIY sy ho an'ny fianarana, saingy tsy ho afaka hahatratra vokatra mitovy amin'ny matihanina ianao.
Fampiharana scanner 3D
Ho an'ny Fampiharana scanner 3D, azo ampiasaina amin'ny fampiasana maro kokoa noho izay azonao eritreretina:
fampiharana indostrialy: Azo ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny kalitao na ny refy, mba hahitana raha mahafeno ny fandeferana ilaina ny ampahany vita.
Injeniera mihodina: tena ilaina tokoa izy ireny mba hahazoana modely nomerika mazava tsara amin'ny zavatra iray mba hianarana azy sy hamerenana azy.
As-built documentation: Ny maodely marina momba ny toe-javatra misy ny trano na ny fanorenana dia azo atao amin'ny fanatanterahana tetikasa, fikojakojana, sns. Ohatra, ny fihetsehana, ny deformation, sns., dia azo tsikaritra amin'ny famakafakana ireo modely.
fialamboly nomerika: Azo ampiasaina hijerena zavatra na olona hampiasaina amin'ny sarimihetsika sy lalao video. Azonao atao, ohatra, ny mijery mpilalao baolina kitra tena izy ary mamorona modely 3D hanamafisana azy mba ho tena zava-misy kokoa amin'ny lalao video.
Famakafakana sy fiarovana ny vakoka ara-kolontsaina sy ara-tantara: Azo ampiasaina hamakafaka, hanoratana, hamorona rakitsoratra nomerika, ary hanampy amin'ny fiarovana sy fikojakojana ny lova ara-kolontsaina sy ara-tantara. Ohatra, hamakafaka ny sary sokitra, ny arkeolojia, ny mummies, ny zavakanto, sns. Azo amboarina koa ny kopia marina mba hampiharihary azy ireo ary tsy simba ny tany am-boalohany.
Mamorona modely nomerika amin'ny sehatra: azo anadihadiana ny toe-javatra na tontolo iainana mba hamaritana ny haavon'ny terrain, hanova ny lalana na ny tany ho endrika 3D nomerika, mamorona sari-tany 3D, sns. Ny sary dia azo alaina amin'ny alàlan'ny scanner laser 3D, amin'ny RADAR, amin'ny sary zanabolana, sns.
Ahoana ny fisafidianana scanner 3D
Amin'ny fotoana mifidiana scanner 3D mety, raha misalasala ianao eo anelanelan'ny modely maromaro, dia tokony hamakafaka ireo toetra maromaro ianao mba hahitana izay mifanaraka amin'ny filanao sy ny teti-bola azonao ampiasaina. Ny teboka tokony hotadidina dia:
teti-bola: Zava-dehibe ny mamaritra hoe ohatrinona no azonao ampiasaina amin'ny scanner 3D anao. Misy manomboka amin'ny €200 na €300 ka hatramin'ireo mitentina an'arivony euros. Izany koa dia hiankina amin'ny fampiasana an-trano, izay tsy mendrika ny hampiasana vola be loatra, na ho an'ny fampiasana indostrialy na matihanina, izay handoavana ny fampiasam-bola.
araka ny marina: dia iray amin'ireo endri-javatra manan-danja indrindra. Ny tsara kokoa ny marina, ny vokatra tsara kokoa azonao. Ho an'ny fampiharana an-trano dia mety ho ampy ny fahitsiana ambany, fa ho an'ny fampiharana matihanina dia zava-dehibe ny tena marina mba hahazoana ny antsipiriany kely indrindra amin'ny modely 3D. Ny scanner ara-barotra maro dia matetika eo anelanelan'ny 0.1 mm ka hatramin'ny 0.01 mm, avy amin'ny mari-pamantarana ambany ka hatramin'ny fatiantoka ambony kokoa.
vahaolana: tsy tokony afangaro amin'ny precision izany, na dia miankina amin'izany koa aza ny kalitaon'ny modely 3D azo. Raha manondro ny haavon'ny fahamendrehana tanteraka amin'ny fitaovana ny fahitsiana, ny famahana dia ny elanelana kely indrindra mety misy eo anelanelan'ny teboka roa ao anatin'ny maodely 3D. Matetika izy io no refesina amin'ny milimetatra na microns, ary ny kely kokoa no tsara kokoa ny vokatra.
Hafainganana ny hafainganam-pandeha: ny fotoana hanaovana ny scan. Miankina amin'ny teknolojia ampiasaina, ny scanner 3D dia azo refesina amin'ny fomba iray na hafa. Ohatra, ny scanner mifototra amin'ny hazavana voarafitra dia refesina amin'ny FPS na frame isan-tsegondra. Ny hafa dia azo refesina amin'ny isa isan-tsegondra, sns.
Mora ampiasaina: Hevi-dehibe iray hafa tokony hodinihina rehefa misafidy scanner 3D. Na dia maro aza no efa mora ampiasaina ary efa mandroso tsara mba hamitana ny asa tsy misy fandraisan'ny mpampiasa betsaka, dia hahita sarotra kokoa noho ny hafa koa ianao.
haben'ny ampahany: Tahaka ny fananan'ny mpanonta printy 3D fetran'ny refy, toy izany koa ny scanner 3D. Ny filan'ny mpampiasa iray izay mila manodina zavatra kely dia tsy mitovy amin'ny olona te hampiasa azy amin'ny zavatra lehibe. Amin'ny toe-javatra maro, izy ireo dia ampiasaina amin'ny scan zavatra samy hafa habe, noho izany dia tokony hifanaraka amin'ny lafin-javatra kely indrindra sy ambony indrindra izay milalao miaraka.
Portability: Zava-dehibe ny hamaritana hoe aiza ny tifitra kasaina hatao, ary mila maivana ve ny mitondra sy maka sary amin'ny toerana samihafa, sns. Misy ihany koa ireo mandeha amin'ny bateria afaka misambotra tsy tapaka.
mifanentana: Zava-dehibe ny fisafidianana ireo scanner 3D mifanaraka amin'ny sehatra misy anao. Ny sasany dia cross-platform, mifanaraka amin'ny rafitra fiasa samihafa, fa tsy ny rehetra.
Software: Izany no tena mampandeha ny scanner 3D, ny mpanamboatra an'ireo fitaovana ireo matetika no mametraka ny vahaolana ho azy ireo. Ny sasany matetika dia manana fiasa fanampiny ho an'ny famakafakana, fanaovana modely, sns., Ny hafa dia tsotra kokoa. Mitandrema anefa, satria ny sasany amin'ireo programa ireo dia tena mahery, ary mila fepetra kely indrindra avy amin'ny solosainao (GPU, CPU, RAM). Ary koa, tsara ny manolotra fanohanana tsara sy fanavaozana matetika ny developer.
fikarakarana: Tsara ihany koa fa ny fitaovana fisamborana dia voatazona haingana sy mora araka izay azo atao. Ny scanner 3D sasany dia mila fanamarinana bebe kokoa (fanadiovana ny optique,…), na mila calibration manual, ny hafa manao izany ho azy, sns.
dia midika hoe: Zava-dehibe ny hamaritana hoe inona ny fepetra mandritra ny fisamborana ny modely 3D. Ny sasany amin'izy ireo dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitaovana sy ny teknolojia sasany. Ohatra, ny habetsaky ny hazavana, ny hamandoana, ny mari-pana, sns. Matetika ny mpanamboatra dia manondro ny faritra izay miasa tsara ny modely, ary mila misafidy izay mifanaraka amin'ny fepetra tadiavinao ianao.
Kojakoja mpanonta sy fanamboarana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Mividiana scanner 3D: ny fomba hisafidianana ny tsara indrindra
Arduino Timer: milalao miaraka amin'ny fotoana amin'ny tetikasanao